musha AFRAN FOOTBALL STORI Rigobert Song Childhood Story Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhora Legend iro rinonyatsozivikanwa nezita rezita rezita; "Mukuru Mukuru". Yedu Rigobert Song Childhood Story pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko kubvira paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nyaya yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mhuri, pedo nevakafa uye nezvimwe zvinhu zvisingatauri pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva pamusoro pokutonga kwake munhare yekudzivirira yeCameronian national team. Kunyange zvakadaro, vashoma chete vatevedzeri vanoziva zvakawanda nezveRigobert Song's Bio iyo inofadza zvikuru. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Rigobert Song Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Rigobert Song Bahanag akaberekwa musi we1st raJuly 1976 kuNkenglicock, taundi riri kumaodzanyemba kweCameroon uko kusina maturo kunoguma apo kune bhora kune rimwe nerimwe pamakumbo.
Akaberekwa kuna amai vake, Bernadette Song uye baba vakadzoka, Paul Song. Baba vaRwiyo, Paul Song, vakafa paaiva muduku. Sezvo akadaro, haana kumboziva baba vake asi asi anotsanangura kubudirira kwake kwose kwaari. Pasina mubvunzo, kusavapo kwababa vake muhupenyu hwake kwaiva nesimba rinokurudzira kwaari.
Munguva yemakore ake ekuyaruka, Rwiyo rwaionekwa se alpha vechidiki, mumwe munhu aifunga basa rokutonga mumatambudziko ose-kutamba mumharaunda yekwawo. Kare kumashure, iye akava nechisimba zvakasimba sezvaaiita kumakwikwi emunharaunda uye kurwisana nevatambi kupfuura makore ake.
Nguva yechokwadi yakauya kuna Rigobert Song, zuva iro roto rake rakazoitika. Kuwana chisarudzo cheFrench chechiFrench club callup (Metz) ndiyo nguva Rigobert akaziva kuti pakupedzisira achava mupfumi. Panguva iyi yekudaidzira, Chido cheNheyo yekutamba tende rake rwenyika zvino chakaonekwa kuti hachirevi fantasy inopfuura.
Rwiyo rwokusvika kuFrance rakatanga basa rake rekuMetz. Akaita kuonekwa kwakasimba kwakamuita sarudzo kusvika Izvo shumba dzinofadza nokuda kweNyika yeNyika mu1994 kwaakazova rekodhi yenyika (muduku mudiki wepamberi kuti awane kadhi tsvuku munhoroondo yeNew Cup Cup).
Rigobert Song Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pasina mubvunzo, Rigobert chiratidzo kune iyo yeAfrica yebhoza inofunganya. Kutamba kwake kukwanisa uye kugona, kunyanya mararamiro ake kubva panzvimbo inovaka mufananidzo wakakwana wake.Chokwadi ndechekuti; Rigobert murume akazara wemhuri. Rudo rwehupenyu hwake, Gabrielle Esther Nnomo Mballa ave ane Rwiyo kubva pamazuva ake ekutamba.
Zvose Rwiyo naEsteri vane vana vana (vanakomana vaviri nevanasikana vaviri). Mazita evana vavo ndeavo; Ronny, Bryan, Yohanna Bernadette naHillary Veronique Liliane. Rigobert Song akavimbisa kuti mhuri yake (mudzimai nevana) inogara muLiverpool apo iye akatamira kune dzimwe nyika kuti atambe bhora rake.
Rigobert Song Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Kurwara uye Pedyo neRufu
Zvose zvakaitika pazuva rekufadza, 3rd October 2016 apo madamaria neCamerolia neFrance vakarwa kwemisi kwemazuva kuti vaponesese hupenyu hwaRigobert Song uyo akatambura nehutano hwakakonzerwa nehutachiona.
Aimbova Cameroon player Rigobert Song akanga ane chirwere pamusha wake muJaounde uyo akamuona achiwira mu coma. Maererano nemishumo, dai yakanga isiri iyo imbwa yake ingadai yakafa. Kunyange zvakadaro, yakave yakaparidzwa zvakanyanya pamusoro pehuwandu hwemagariro evanhu uye nhau dzakawanda dzemashoko kuti akanga atofa.
Rigobert, apo akapiwa hurukuro mushure mokunge apora akapa nhoroondo pane zvakaitika chaizvoizvo. Mumashoko ake ...
"Ndakanga ndasiya mhoo yakazaruka nokuti ndakanga ndakamirira mushanyi, dai ndakanga ndasiya yakavharwa ndingadai ndakafa. Ndakanga ndisingazivi zvaiitika kwandiri. Ndakanga ndisina mhosva zvachose. Handina kumboziva kuti ndairwisana pakati pehupenyu nerufu. Sezvakawira II uye ndakanzwa ndisingabatsiri, ndakaona imbwa yangu yakatanga kurira zvikuru iyo yakatsanangurira mwene weimba yainzi an ambulensi.
Icho chakanga chiri chishamiso !! Pandakasimuka kubva kuComa ndakatarisa 60 kilos chete, zvisingaiti kune mukomana zvakakura sezvandaiita, "
Pasi apa Rigobert Song maawa mushure mokunge amuka kubva mumazuva ake maviri coma.
Paakanga ari mu coma, uyo aimbova Liverpool mutambi akati aive nechokwadi kuti akaona baba vake vakafa. Mumashoko ake ...
"Rima rakatanga uye pandakanga ndiri mu coma, ndakaona baba vangu vakanga vafa apo ndanga zvishoma zvokuti haufaniri kuyeuka. Paakaona ini, akati; Rigobert !!, uri kuitei ikoko? Come !!! Akati kwandiri. Icho chaiicho chaicho chakaoma mamiriro ezvinhu.
Ndiri kufara iye zvino ndiri kurarama munguva yemazuva ano, uye kwete zvakare munguva yakapfuura. Chinokosha ndechekuti ndine hutano hwakanaka, ndiri nani, "
Aya ndiwo mazwi Rigobert akaudza BBC Football World. Rigobert akatenda kuti vaiva vateveri vake, mhuri / hama uye kunyanya, Mutungamiri wenyika yake, Paul Biya uyo akabhadhara $ 78,000 pamitemo yezvokurapa iyo yakamuponesa. Akaropafadzwawo nemashoko akanaka emuLiverpool kuburikidza ne twitter sekuonekwa pasi apa.
"Vose vatevedzeri zvikuru mhuri yangu yakanga yatoisa Mwari mumatambudziko. Vose vaiziva kuti mamiriro angu ezvinhu akaipa sei uye vakatanga kunyengetera. Mumwe nomumwe mumhuri yangu ainyengetera, achikumbira 'Mwari ndapota musaita izvozvo, musatora Rigobert'. Ndinokutendai-imi mose munondiita kuti ndidzoke. "
Rigobert Song Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Family Facts
Pfungwa yekurasikirwa nababa vake, Paul Song pazera remakore uye asina kunyange kuva nemufananidzo wake mukuyeuka kunounza marwadzo asingatambudziki kuna Rigobert Song. Paakanga achikura, amai vake, Bernadette Song vakawana rubatsiro rwehama dzake. Akabatanidzwawo nehafu yehanzvadzi yake ndiye baba vekuve Arsenal muchengeti weCameroon nemudziri wekudzivirirwa weCameroon, Alexandre Dimitri Song Billong, AKA Alex Song.
Alex Song anogara achionga baba vake Rigobert Song uyo ave akaita sababa wechipiri uye simba guru maari kusarudza bhora semabasa. Pasi pana Alex nemhuri yake.
Rigobert Song Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Red Card Chokwadi
Kunze kubva Zinedine Zidane, Rigobert Song ndiye chete mutambi wekuendeswa kune dzimwe nyika mbiri dzakasiyana, imwe inopikisa Brazil mu 1994 uye imwe inopikisana neChile mu 1998. Anobatawo zvinyorwa semutambo muduku kupfuura ose akambotumirwa muNyika Yenyika, ane makore anopfuura 17.
Kubva kune imwe nzvimbo, Rigobert Song anonzi ndiye chete mutambi wekutamba mumakwikwi ose e1994 uye 2010 FIFA World Cup. Akanga aonekwa mumutambo we 1994, 1998, 2002 uye 2010 FIFA World Cup.
Pakupedzisira, chokwadi chinotyisa chakanga chave chichiratidza makore e24 uye mazuva e42 muzera wezera pakati Roger Milla (42 nemakore nemazuva 35) inoratidzwa kumusoro uye 17-ane makore Rigobert Song (17 nemakore nemazuva 358) panguva yekombe yenyika ye1994. Iri gaka rezera rinoramba riine guru pakati pevadzidzi vaviri muNhau yeNyika Cup.
Zvakakosha kuziva kuti muchengeti asingagari Roger Milla vakatungamira Indomitable Lions kuChitatu-Final Cup Cup mugore re1900.
Rigobert Song Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Usaenzanisa neni neRio Ferdinand
Apo Rigobert Song akanyorera West Ham United nokuda kwe £ 2.5 mamiriyoni mugore re 2000, The club yakaratidza kuti inogona kuchinjwa Rio Ferdinand, uyo akaendeswa kuLeeds United. Izvi zvakatsamwisa Ex-Cameronian defender.
Rigobert Song's debut yakarondedzerwa na BBC as "Asina kufara". Mumazuva ake okutanga, Rwiyo rwakaramba ruchireva kuti akanga asingadi kuenzaniswa naFerdinand, sezvaaifunga kuti yakanga ichizvidza tarenda yake.
Rigobert Song Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Rigobert is deeply intuitive and sentimental. Anoshushikana, ane hanya, uye ane hanya zvikuru nezvezvinhu zvemhuri uye kumba kwake. Rigobert anonzwira tsitsi uye anowirirana nevanhu vanoramba vari pedyo. Ndiye mumwe munhu acharatidza tsitsi kune vamwe vanhu kurwadziwa uye kutambura. Nheyo pazviri pamusoro apa, isu iye zvino tinopa iwe muchidimbu zvikwi zveunhu hwake.
Strengths: Iye Anononoka, anofungidzira zvikuru, ane hanya, anonzwira tsitsi uye anonyengetedza zvikuru.
Kushaya simba: Anogona kuva anonyangadza, asina tariro, achishushikana uye anonyengera.
Chii Rigobert Song inoda: Unyanzvi, kuzvivaraidza (kumba-based type), kunonoka pedyo kana mumvura, kubatsira mhuri yake / hama uye kuva nechikafu chakanaka neshamwari.
Chii Rigobert asingadi: Vatorwa, kushorwa kupi zvako kwemai vake vanodikanwa, vachirondedzera nezvezvokwadi pamusoro pemudzimai wake uye musikana (s).
Rigobert Song Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Mahofisi Anotarisira
Pakupedzisira 2015, Rwiyo rwaive ruchiri pedyo nekuva mutungamiri weboka reChada rwenyika asi chibvumirano hachina kumbogadziriswa nekuda kwezvikonzero zvisingazivikanwi. Muna February 2016, Rwiyo rwakagadzwa semutungamiriri we Cameroon "A" timu yenyika. The "A" timu ibati rehurumende rinoitwa nevatambi vanobva muCameroon. SezvaApril 2018, Rigobert akazova mumwe wevashandi ve77 kune avo vakanga vasipo basa reCameroon team team.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nekuverenga Rigobert Song Childhood Story pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!